OlweSekhukhune nePolokwane lubuyela enkantolo
Malibongwe Mdletshe | May 31, 2021
UMENGAMELI weRoyal AM, uShauwn Mkhize, usebhoboke okokuqala ngomdonsiswano oqhubekayo othinta iSekhukhune United osuchaphazele iqembu lakhe eliqede isizini yeGladAfrica Championship lihlezi phezulu nobekusho ukukhushulelwa kwalo kwiDStv Premiership.
Lo mdonsiswano okumanje usenkantolo usuke ngecala elithinta iSekhukhune United eyamangalela iPolokwane City ngokungadlalisi abadlali abahlanu abangaphansi kweminyaka engu-23 komunye imidlalo yeGladAfrica ngoJanuwari nonyaka.
IDispute Resolution Chamber (DRC) yalahla iCity ngecala, yase iyiphuca amaphuzu amathathu. Nokho iSekhukhune yayisidlulisela kumahluleli lesi sinqumo ngoba inganeme ngaso. Umehluleli weSafa, wasiguqula wanikeza iSekhukhune amaphuzu amathathu, nokuyiwona ayibeke ethubeni lokuqhwakela phezulu kwi-log ngaphambi komdlalo wokugcina weligi. Kodwa i-PSL yabe isisichitha isinqumo sikamahluleli ithi lolu daba kusafanele lucutshungulwe.
Ephendula imibuzo abethunyelelwe yona yiSolezwe ngeSonto, uShauwn uthe: “Lesi yisimo esibuhlungu kodwa lolu wudaba engingathandi ukuphawula ngalo njengoba lusesezithebeni zenkantolo. Ngakho asilinde umthetho uhambe eyawo indlela nokuyothi uma seluphothuliwe bese ngiyakwazi-ke ukuphawula.”
UMkhize usho kanjena nje ngempelasonto edlule ube nemibhiyozo nabathandi bebhola baseThekwini namaphethelo kubungazwa ukunqoba isicoco seGladAfrica kwaleli qembu, phezu kokuba i-PSL ingakasikhiphi isinqumo esicacisa ngeqembu elingompethha beGladAfrica.
Ngokwenzeka kwezinto njengamanje kubukeka kungenzeka kuphinde kuphele elinye isonto iRoyal AM yaseThekwini neSekhukhune United yaseGoli belindele ngokwehlukana ukuchonywa umqhele wokuba ngompetha beGladAfrica Championship.
Eyokuphela kwesonto elizayo ivele engxoxweni Isolezwe ngeSonto elibe nayo nesikhulu esiphezulu seSouth African Football Association (Safa), uTebogo Motlanthe.
Lesi sikhulu siqinisekise ukuthi iSekhukhune nePolokwane City bafake amaphepha abo ngokwehlukana enkantolo yaseGoli.
ISekhukhune yona ifake isicelo sokuthi udaba luphothulwe ngoLwesine futhi kumiwe esinqumeni sikamehluleli ozimele, esanikeza yona amaphuzu amathathu ephucwa iPolokwane.
“Siya enkantolo ngalolu daba ngoLwesine noma ngoLwesihlanu. Womabili amaqembu, iSekhukhune United nePolokwane City asewafakile amaphepha awo enkantolo,” kusho uMotlanthe.
Akuveli ukuthi iPolokwane yona ifake amaphepha athini enkantolo kodwa Isolezwe ngeSonto lingakuveza ukuthi kukhona nomoya othi ingase ivike ngombhedukane, iCoronavirus.
Kuthiwa iPolokwane isiveza ukuthi okwenza ingadlalisi isibalo esigcwele esisemthethweni, sabadlali abaneminyaka engaphansi kuka-21, yingoba kukhona abebehaqwe yiCoronavirus.
IRoyal AM beyidinga iphuzu ukuqeda isesicongweni, okuyinto eyenzile. IPremier Soccer League (PSL) isijikile leso sinqumo, yala ukunika iSekhukhune amaphuzu futhi kugcine ngokuthi emuva kwemidlalo yokugcina, yaphinda yanqaba ukunikeza ngesicoco nezindodo kompetha.
Kuyimanje iRoyal AM iqhwakele ngaphuzu angu-51, iSekhukhune isendaweni yesibili ngangu-50.
“ISafa njengamanje kayikwazi ukuphawula kodwa engingakusho wukuthi isinqumo somehluleli singijuqu futhi siyabophezela. Ukuphawula kweSafa okwamanje sizokubamba kodwa uma selidlulile udaba sizozenza izethulo,” usho kanje uMotlanthe ebuzwa ngokuthi ngabe iPSL ikhomba ukuthi isiziphethe yini ngokugolozela isinqumo senhlangano eyengamele ibhola eNingizimu Afrika.
Abakhulumela amaqembu womabili kabatholakanga. Ummeli weSekhukhune, uKarabo Mathang-Thabuse Karabo ubengalubambi.
Kunalesi siphithiphithi nje la maqembu womabili abenemicimbi yokunqoba ngeledlule, ezindaweni ezehlukene.